ဘီကီနီဝတ်ဆင်ခြင်း ကို ပိတ်ပင်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဘီကီနီဝတ်ဆင်ခြင်း ကို ပိတ်ပင်..
ဘီကီနီဝတ်ဆင်ခြင်း ကို ပိတ်ပင်..
Posted by we R one on Jun 11, 2011 in News | 21 comments
စပိန်နိုင်ငံ ဘာစီလိုနာ မြို့သည် မြို့၏ ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် မြို့တွင် ၌ ဘီကီနီ ခေါ် ရေကူဝတ်စုံ များဝတ်ဆင်ကာသွားလာခြင်း ကို ပိတ်ပင်သည့် ဥပဒေ တစ်ရပ်ပြဌာန်း လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ အဲဒီ တားမြစ်ချက် ဥပဒေ နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာစီလိုနာ မြို့တော်ကောင်စစ်ဝန် က ” ဒီမြို့မှာနေတဲ့ လူတချို့ဟာ လမ်းတွေပေါ်မှာ ဘီကီနီလို မလုံတလုံ အ၀တ်တွေဝတ်ပြီးသွားလာနေတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကြောင့်၊ အင်္ကျီချွတ်ပြီး သွားလာနေတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကြောင့် စိတ်ပျက်ခဲ့ကြရပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ယခု ဥပဒေ ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ အတွက် ဘာစီလိုနာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ကိုယ်ပေါ်တွင် အ၀တ်အစားဝတ်ရန် ငြင်းဆန်သည့် သူများကို ဥပဒေအရ အပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ဥပဒေအရ ကမ်းခြေများ ၊ ကမ်းခြေနှင့်နီးသောလမ်း များတွင်သာ ဘီကီနီ ကဲ့သို့ မလုံတလုံ အ၀တများ ၀တ်ဆင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားနေရာများတွင် နေထိုင်သွားလာပါက ဒဏ်ငွေ ယူရို120 မှ 130 ကြားတပ်ရိုက်မည်ဖြစ်ကာ အ၀တ်အစားလုံးဝ အပါပဲ သွားလာပါက ယူရို 300 မှ 500 အထိ တပ်ရိုက်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
ဘာစီလိုနာ မြို့တော် သည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်မှ စ၍ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအား မြို၏ နာမည်ကျော် အထိမ်းအမှတ်နေရာများသို့ သွားရောက်ရာတွင် သင့်တော်သော အ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင်လည်ပတ်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဘာစီလိုနာမြို့သို့ ဗြီတိန်တစ်နိုင်ငံတည်းမှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ငါးသိန်းခန့်လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒီမှာလည်း ကောင်မလေးတွေ ကို ဖမ်းပြီး ဒဏ်ရိုက်ခိုင်းလိုက်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်။
ကိုရီးယား ရောဂါ ထနေကြတာ လမ်းပေါ်မှာ စကတ် အတို လေတိုက် တော့ လန်..
ဆက်သာ တွေးပါတော့.. လမ်းမပေါ်က ပုံရိပ်များ ဆိုပြီး ကားတစီးနဲ့ လှည့်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက် ပိုစ်တင်ရမလို ဖြစ်နေပြီ။
ဆူးမမ တင်မယ်ဆို မြန်မြန်တင်လေ စောင့်အားပေးနေမယ်
Hope pa byar.Bar twe yoo nay kya man lal ma thi par boo.i ka talk myanmar ma lay twe ko myanmar traditional san san pal wote say chin tal
ဒီမှာ ဘီကီနီ (သို့) မလုံ့တလုံ မ၀တ်မနေရ လို့ ဥပဒေ ထုတ်လိုက်ရင်.. ဘယ်နေမလဲမသိဘူးနော်…:D
ဟောဗျာ ဘာစီလိုနာ မြို့ က ဘိုးဘိုး ဦးဦး ကိုကို ညီညီ တို့ တော့ ငတ်ပြီ စန်းစန်းညွန့်ဖြစ်ရပြီ ပေါ့နော် ။ ဟီဟိ
ဒါဆိုလည်း မြန်မာ ပြည်လာကြလို့ သာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတော့လား..
၀ိုင်းစု တို့ သဉ္ဖာဝင့်ကျော် တို့ရှိတယ်လို့ … ဟိဟိ
စကပ်တိုတိုနဲ့ လမ်းလျှောက်ရုံတင်ဆိုတော်သေးတာပေါ့…။ စက်ဘီးစီးသွားရင် ..စဉ်းစားသာကြည့်တော့…. ဆက်ပြောရရင်မကောင်းရှိရော့မယ်……………
အနောက် နိုင်ငံ က တောင် ဟီရိ သြတပ္ပ ကို နားလည်နေတတ်လာ ပြီ နော်။
မြန်ပြည် က မမ တို့ ရေ ကိုယ် က အနုပညာ အသိုင်းအ၀ိုင်း က မို့ ၊ မော်ဒယ် တယောက် မို့ ဆိုပြီး၊ အားပေးက အားပေး လို့ လုပ်တဲ့ သူက လဲ အရှက်အကြောက် မရှိ ပေါ်ပေါ် ဘဲ ဆိုရင် တော့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကြီးတဲ့ နာမည် ကို ပဲ ဖက်တွယ် နေရ မှာဘဲ။
တိုးရစ်မကြီးတွေက.. ဘီကီနီနဲ့ မလုံ့တလုံဝတ်တာကြည့်ရတော့… စိတ်ပျက်စရာကြီးတဲ့လေ…။
( စိတ်ထဲ.. ပေါင် ၂၀၀ကျော်တဲ့..အမျိုးသမီးတွေ..ဘီကီနီနဲ့ လူတွေကြားထဲ… သွားနေတာပြေးမြင်လိုက်ပါ..)
ယောက်ျားတွေကလည်း.. အပေါ်အကျီမပါတာတွေနဲ့.. ဘေးလူတွေကို.. Respect မရှိ.. ဖြစ်နေပါသတဲ့..။
( စိတ်ထဲ.. အသက်၆၀ကျော်.. လက်ပြင်တွေတွဲကျနေတဲ့အဘိုးကြီးတွေ.. အကျီမပါပဲ.. မြို့ ထဲလမ်းမပေါ်လျှောက်နေတာ ပြေးမြင်လိုက်ပါ)
ပြောရရင်.. ယူအက်စ်မှာလည်း.. Nudity Laws ရှိပါတယ်..။ လေ့လာဖို့ပါ..။
Federal Land and California State Parks
Every person who violates subdivision 1 of this section after having entered, without consent, an inhabited dwelling house, or trailer coach as defined in Section 635 of the Vehicle , or the inhabited portion of any other building, is punishable by imprisonment in the state prison, or in the county jail not exceeding one year.
Section 4322 of Title 14 of the California Administrative Code regarding nudity in the state parks: No person shall appear nude while in any unit except in authorized areas set aside for that purpose by the Department. The word nude as used herein means unclothed or in suchastate of undress as to expose any part of portion of the pubic or anal region or genitalia of any person or any portion of the breast at or below the areola thereof of any female person.
While this regulation allows for setting aside specific clothing optional areas, the parks department hasn’t taken advantage of the provision. State Park rangers have operated for many years underapolicy known as the “Cahill” policy, named afteraformer Parks Director: “it shall be the policy of the Department that enforcement of nude sunbathing regulations within the State Park System shall be made only upon the complaint ofaprivate citizen. Citations or arrests shall be made only after attempts are made to elicit voluntary compliance with the regulations.” However, when the Cahill Policy was written, the public stance on nudity was more liberal than it is now.
Since the people most likely to makeacomplaint are also the least likely to make an effort to get toaremote part ofastate beach, those areas have become clothing optional. If you stay in those areas, you are unlikely to be bothered. However, ifaranger appears and asks you to put your clothes on, comply and stay clothed for the rest of the day to avoidacitation. If you cross the line from mere sunbathing to other activities, you can (and probably will) be prosecuted under California Penal Code Section 314, andanyone convicted will carryalifetime registration asasex offender. The penal code states:
Every person who willfully and lewdly, either: 1. Exposes his person, or the private parts thereof, in any public place, or in any place where there are present other persons to be offended or annoyed thereby; or, 2. Procures, counsels, or assists any person so to expose himself or take part in any model artist exhibition, or to make any other exhibition of himself to public view, or the view of any number of persons, such as is offensive to decency, or is adapted to excite to vicious or lewd thoughts or acts, is guilty ofamisdemeanor.
ပူတာတော့ ပူတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ လုံလုံခြုံခြုံနဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၀တ်လို့ရတာ ရှိသားပဲ…
Nudity Laws တွေနဲ့ ရှင်းပြတာထက်စာရင်..
လူ့အခွင့်အရေး.. ရှုထောင့်ကနေ ရှင်းပြရင် ပိုမကောင်းလား..
ဘာကြောင့်ဆို.. သူရို့လည်း.. ၀တ်ချင်ရှာမပေါ့….လှချင်ရှာ မပေါ့..
ပိတ်ပင်ကောင်း၏ ……. မကောင်း၏ ကို..ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပေးပါဦးခင်ဗျား…
ထုံးစံတိုင်း သဂျီးမင်းရဲ့ အမိန့်တော်အတိုင်း သူများနဲ့မတူအောင်မန်းအုန်းမှ
လွန်လေပြီးသော ကျောက်ခေတ်က ဘာမှဝတ်ကြဘူးဆိုဘဲ
ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိလာတာက ဘယ်နေ့က ဘယ်သူက ဘယ်ပုံစံနဲ့ ဘယ်နေရာမှာ
နောက် ပိုပြီး ပေါ့ပါးတာတွေဝတ်တယ်
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပေါ့ပါးတာတွေဝတ်တယ်
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
နောက် ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး ပိုပြီး
ဘာမှ ပိုပြီး ဝတ်စရာမလိုတော့ဘူး
သဘာဝတရားကြီးရဲ့လည်ပတ်မှု့ကို အတိုင်းထက်လွန် ဝေဖန်သူဟာ အတ္တဝါဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့နော
သူ့ဘက်က လေဒီဂါဂါက ရပ်တည်ပေးလို့လေ …
လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်အရွေးခံဘို့ မဲဆွယ်နေတာ
အမယ်လေးနော် စပိန်နိုင်ငံကတောင်စည်းကမ်းတင်းကျပ်လာပြီးဆိုတော့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု တော်တော်လေးဆိုးရွားလာလို့နေမှာပေါ့
မြန်မာနိုင်ငံက ဘီကီနီဝတ်တာကိုပဲ အရင် ပိတ်ပင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။
ဘယ်နားမှာ ၀တ်တာကို ပိတ်ပင်မှာလဲမသိ
သိတဲ့သူတွေ မျှဝေပေးကြပါအုန်း …………
သူ့နေရာနဲ့ သူပေါ့။း)
ုမြန်မာပြည်က ကမ်းခြေတွေမှာလည်း ကောင်မလေးတွေ ဘီကီနီ မဝတ်မနေရ လည်း လုပ်သင့်ပါတယ်။